ပန်းရောင်းစားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီးရဲ့ လေစားစရာကောင်းတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနှင့် ဘဝခံယူချက် - Mega Wave
သင်္ဘောသီးတွေကို အသားထူထူ ၊အစေ့နဲနဲ ပြွတ်ခဲနေအောင် သီးစေသောနည်း
အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆိုပြီး ကားထဲမှာနွယ်ပင်တွေထည့်ထားခဲ့တဲ့ တက္ကစီကားဆရာရဲ့အဖြစ်
ရှားစောင်းလက်ပက်ကို အိမ်မှာ ဘယ်လိုစိုက်ရမလဲ ဆိုသူများအတွက်စိုက်ပျိုးနည်း
မိမိတို့၏ တစ်နေ့တာ မှာ ဖုန်းလုံးဝ မသုံးသင့်တဲ့အချိန် များ
ပန်းရောင်းစားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီးရဲ့ လေစားစရာကောင်းတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနှင့် ဘဝခံယူချက်
ပန်းရောင်းစားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီး ရဲ့ လေစားဖွယ် ခံယူချက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား
ကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲတွေမှာ ဥရုဂွေးအသင်းကို ရံဖန်ရံခါ ကြားရတတ်ပါတယ်နော်။ တောင်အမေရိကတိုက်က နိုင်ငံလေးဖြစ်ပြီး သိပ်တော့စိတ်ဝင်စားစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက ဥရုဂွေးနိုင်ငံကို ပဲ့ကိုင်သွားတဲ့
သမ္မတကြီး Jose Mujicaပါ။ရိုးသားလွန်းတဲ့ သမ္မတကြီးတစ်ဦးပါ။ကမ္ဘာကျော် သတင်းဌာန ဘီဘီစီကတောင် The World’s ‘Poorest’ President ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတလို့တောင် တင်စားခဲ့တာပါ။
Jose Mujica က ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ ဆင်းရဲတာလဲ။Jose Mujica ကို ၁၉၃၅ ခုနှစ် မေလ (၂ဝ) ရက်နေ့မှာ ဥရုဂွေးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် Montevideo မှာ မွေးတာပါ။သူ့ရဲ့ ဖခင်က လယ်သမား ၊ ဆင်းရဲ လွန်းလို့ လူမွဲဘွဲ့ ခံလိုက်ရတာပါ။
မိခင်ကတော့ အီတလီနိုင်ငံကနေ နိုင်ငံရေးခိုလှုံတစ်ယောက်ပါ။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ သူ့ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ဘဝက အလုပ်ကြမ်း ပေါင်းစုံလုပ်ပြီးတော့ ကုန် ဆုံးခဲ့ရတယ် ။ ၁၉၆ဝ ခုနှစ်တွေမှာ ကျူးဘား တော်လှန်ရေး ရိုက် ခတ်မှု တွေကြောင့်
ဥရုဂွေးနိုင်ငံမှာ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေ ပေါ်လာပြီးတော့ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်လာချိန်မှာ Tupamaros အဖွဲ့ထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။သူတို့အဖွဲ့က ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုချင်သူ ၊ နိုင်ငံကို အသစ်ပြန်လည် မွေးဖွားလိုသူပါ။
၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေမှာ Jose Mujica ဟာ နိုင်ငံ ရေးသမားဘဝမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာ (၆) ခါရဖူးပြီးတော့ (၁၄) နှစ်အထိ ထောင်ကျခဲ့ ဖူးတယ်။ ၁၉၉၄ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ်အဖြစ် အရွေးခံခဲ့ရတာပါ။
၁၉၉၉ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၂ဝဝ၅ ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှာ သူဟာ မွေးမြူရေးနဲ့ ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Danilo Astori ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ ဥရုဂွေးနိုင်ငံရဲ့ (၄ဝ) မြောက် သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နော်။
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ဆိုရင် အိမ်ဖြူတော်မှာနေတယ်၊ ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ဟာ Élysée Palace မှာနေတယ်၊ ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီး Queen Elizabeth II က သူ့နန်းတော် Buckingham Palace မှာပဲ စံမြန်းတယ်။
ဥရုဂွေးသမ္မတ Jose Mujica ဟာ နိုင်ငံတော်က စီစဉ်ပေးတဲ့ Residencia de Suarez စံအိမ်မှာ မနေဘူး။
အခြွေအရံတွေကိုပါ ငြင်းပယ်ထားလိုက်တာ၊ ရပိုင်ခွင့်တွေကို မယူပါဘူး။Montevideo မြို့ရဲ့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ လယ်တောအိမ်မှာပဲ နေပါတယ်။
Jose Mujica ဟာ သူ့အတွက်နဲ့ နိုင်ငံတော်ကို စရိတ်မတက်စေချင်တဲ့ သဘော။ အဝတ်အစားကိုလည်း ဖြစ်သလိုပဲ ဝတ်တယ်။ ကပိုကရိုနေတတ်ပါတယ်။သမ္မတလစာက (၁၁,၆၃၄) ဒေါ်လာ ရတယ်။ သိန်း (၁၆၀) ကျပ်ပဲ ဆိုပါစို့။ သူ့လစာထဲက (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေကို လှူပစ်ခဲ့တာပါ။
သူ့အိမ်မှာ လယ်ကွင်းကြီးရယ်။ ထွန်စက်အဟောင်းကြီးရယ်။ ခြေတစ်ဖက်ပြတ်နေတဲ့ Manuela လို့ခေါ်တဲ့ ခွေးကြီးရှိပါတယ်။ အိမ်ရဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ အစောင့်ချထားတဲ့ ရဲသား(၂) ယောက်ရယ်ပဲ ရှိပါတယ်။
သမ္မတ Jose Mujica ဟာ ဇိမ်ခံကား မစီးပါဘူး။၁၉၈၇ ခုနှစ်ထုတ် ဒေါ်လာ (၁,၈၀၀) တန် Volkswagen Beetle လိပ်ခုံးကားကိုပဲ မြတ်မြတ်နိုးနိုး စီးနေတုန်းပါနော်။ကျန်းမာရေးမကောင်းရင်လည်း အများပြည်သူတွေနဲ့ ဆေးခန်းမှာပဲ ကုတယ်။ သီးသန့်မကုဘူး။
သူ့အတွက်နဲ့ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေကို မထိခိုက်စေချင်ဘူး။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်မှာ သမ္မတဖြစ်တယ်၊၂ဝ၁၅ ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်မှာ သမ္မတရာထူးက ဆင်းသွားတယ်။သူ့ရာထူးမှာ ပိုမနေဘူး။အချိန်တန်ရင် ဆင်းသွားတယ် လယ်တောထဲက လာတဲ့လူဟာ လယ်တောထဲမှာပဲ ပြန်ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
စိတ်တူ ကိုယ်တူရှိတဲ့ ဇနီးသည် Lucia Topolansky ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်တယ်၊ သားသမီးမထွန်းကားဘူး။ အခုတော့ (၈၅)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သမ္မတဟောင်းကြီးက ပန်းရောင်းစားနေသတဲ့၊ တင်းတိမ် ရောင့်ရဲချက်ပါနော်။“းကျွန်တော့်ကို အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတလို့ ပြောကြတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ မခံစားမိပါဘူး။ ဆင်းရဲတဲ့သူဆိုတာ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားတဲ့ လူနေမှုဘဝကို ကာမိဖို့ ပိုက်ဆံတွေကို မရပ်မနား ရှာဖွေနေရတဲ့သူတွေပါ ကဲ . . . လူ့ဘဝ တိုတို လေးထဲမှာ နောက်ဆုံးပေါ် ဖက်ရှင်၊ တန်ဖိုးကြီးတံဆိပ်တွေနောက်ကို လိုက်ပြီးတော့ ရူးသွပ်နေတော့မှာလား။
အကျိုးရှိတာတွေကို လုပ်နေပြီး ကုန်ဆုံးတော့မှာလား။ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ပါ။ အဓိကအချက်က အရေးမကြီးတာတွေ လုပ်နေရင် အရေးကြီးတာတွေ မေ့တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဒဿနကို အမြဲသတိရသင့်ပါတယ်နော်။ လူ့ဘဝတိုတိုလေးမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေကြရအောင်ပါ။credit : Kyaw Soe Aung
ပနျးရောငျးစားနတေဲ့ ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲဆုံး သမ်မတကွီး ရဲ့ လစေားဖှယျ ခံယူခကျြနဲ့ စိတျနစေိတျထား
ကမ်ဘာ့ ဖလားပှဲတှမှော ဥရုဂှေးအသငျးကို ရံဖနျရံခါ ကွားရတတျပါတယျနျော။ တောငျအမရေိကတိုကျက နိုငျငံလေးဖွဈပွီး သိပျတော့စိတျဝငျစားစရာ မဟုတျပါဘူး။ဒါပမေယျ့ စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးတာက ဥရုဂှေးနိုငျငံကို ပဲ့ကိုငျသှားတဲ့
သမ်မတကွီး Jose Mujicaပါ။ရိုးသားလှနျးတဲ့ သမ်မတကွီးတဈဦးပါ။ကမ်ဘာကြျော သတငျးဌာန ဘီဘီစီကတောငျ The World’s ‘Poorest’ President ကမ်ဘာ့ အဆငျးရဲဆုံး သမ်မတလို့တောငျ တငျစားခဲ့တာပါ။
Jose Mujica က ဘာတှလေုပျခဲ့လို့ ဆငျးရဲတာလဲ။Jose Mujica ကို ၁၉၃၅ ခုနှဈ မလေ (၂ဝ) ရကျနမှေ့ာ ဥရုဂှေးနိုငျငံရဲ့မွို့တျော Montevideo မှာ မှေးတာပါ။သူ့ရဲ့ ဖခငျက လယျသမား ၊ ဆငျးရဲ လှနျးလို့ လူမှဲဘှဲ့ ခံလိုကျရတာပါ။
မိခငျကတော့ အီတလီနိုငျငံကနေ နိုငျငံရေးခိုလှုံတဈယောကျပါ။ ဆငျးရဲလှနျးလို့ သူ့ရဲ့ ဆယျကြျောသကျ ဘဝက အလုပျကွမျး ပေါငျးစုံလုပျပွီးတော့ ကုနျ ဆုံးခဲ့ရတယျ ။ ၁၉၆ဝ ခုနှဈတှမှော ကြူးဘား တျောလှနျရေး ရိုကျ ခတျမှု တှကွေောငျ့
ဥရုဂှေးနိုငျငံမှာ လကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့တှေ ပျေါလာပွီးတော့ အစိုးရ ဆနျ့ကငျြရေး လုပျလာခြိနျမှာ Tupamaros အဖှဲ့ထဲကို ဝငျရောကျခဲ့တယျ။သူတို့အဖှဲ့က ငွိမျးခမျြးမှုကို လိုခငျြသူ ၊ နိုငျငံကို အသဈပွနျလညျ မှေးဖှားလိုသူပါ။
၁၉၇၀ ခုနှဈတှမှော Jose Mujica ဟာ နိုငျငံ ရေးသမားဘဝမှာ သနေတျဒဏျရာ (၆) ခါရဖူးပွီးတော့ (၁၄) နှဈအထိ ထောငျကခြဲ့ ဖူးတယျ။ ၁၉၉၄ ရှေးကောကျပှဲမှာ လှတျတျော ကိုယျ စားလှယျအဖွဈ အရှေးခံခဲ့ရတာပါ။
၁၉၉၉ ရှေးကောကျပှဲမှာတော့ အထကျလှတျတျောအမတျ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။၂ဝဝ၅ ခုနှဈ မတျလ (၁) ရကျနမှေ့ာ သူဟာ မှေးမွူရေးနဲ့ ရလေုပျငနျးဝနျကွီး ဖွဈလာခဲ့တယျ။၂ဝ၁ဝ ခုနှဈ မတျလ (၁) ရကျနမှေ့ာ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး Danilo Astori ကို ကြျောဖွတျပွီးတော့ ဥရုဂှေးနိုငျငံရဲ့ (၄ဝ) မွောကျ သမ်မတ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျနျော။
အမရေိကနျသမ်မတ Donald Trump ဆိုရငျ အိမျဖွူတျောမှာနတေယျ၊ ပွငျသဈသမ်မတ Emmanuel Macron ဟာ Élysée Palace မှာနတေယျ၊ ဗွိတိနျဘုရငျမကွီး Queen Elizabeth II က သူ့နနျးတျော Buckingham Palace မှာပဲ စံမွနျးတယျ။
ဥရုဂှေးသမ်မတ Jose Mujica ဟာ နိုငျငံတျောက စီစဉျပေးတဲ့ Residencia de Suarez စံအိမျမှာ မနဘေူး။
အခွှအေရံတှကေိုပါ ငွငျးပယျထားလိုကျတာ၊ ရပိုငျခှငျ့တှကေို မယူပါဘူး။Montevideo မွို့ရဲ့ ဆငျခွဖေုံးရပျကှကျမှာရှိတဲ့ လယျတောအိမျမှာပဲ နပေါတယျ။
Jose Mujica ဟာ သူ့အတှကျနဲ့ နိုငျငံတျောကို စရိတျမတကျစခေငျြတဲ့ သဘော။ အဝတျအစားကိုလညျး ဖွဈသလိုပဲ ဝတျတယျ။ ကပိုကရိုနတေတျပါတယျ။သမ်မတလစာက (၁၁,၆၃၄) ဒျေါလာ ရတယျ။
သိနျး (၁၆၀) ကပျြပဲ ဆိုပါစို့။ သူ့လစာထဲက (၉၀) ရာခိုငျနှုနျးအထိ ဆငျးရဲတဲ့ပွညျသူတှကေို လှူပဈခဲ့တာပါ။
သူ့အိမျမှာ လယျကှငျးကွီးရယျ။ ထှနျစကျအဟောငျးကွီးရယျ။ ခွတေဈဖကျပွတျနတေဲ့ Manuela လို့ချေါတဲ့ ခှေးကွီးရှိပါတယျ။ အိမျရဲ့မလှမျးမကမျးမှာ အစောငျ့ခထြားတဲ့ ရဲသား(၂) ယောကျရယျပဲ ရှိပါတယျ။
သမ်မတ Jose Mujica ဟာ ဇိမျခံကား မစီးပါဘူး။၁၉၈၇ ခုနှဈထုတျ ဒျေါလာ (၁,၈၀၀) တနျ Volkswagen Beetle လိပျခုံးကားကိုပဲ မွတျမွတျနိုးနိုး စီးနတေုနျးပါနျော။ကနျြးမာရေးမကောငျးရငျလညျး အမြားပွညျသူတှနေဲ့ ဆေးခနျးမှာပဲ ကုတယျ။ သီးသနျ့မကုဘူး။
သူ့အတှကျနဲ့ နိုငျငံတျောဘဏ်ဍာငှကေို မထိခိုကျစခေငျြဘူး။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှဈ မတျလ (၁) ရကျမှာ သမ်မတဖွဈတယျ၊၂ဝ၁၅ ခုနှဈ မတျလ (၁) ရကျမှာ သမ်မတရာထူးက ဆငျးသှားတယျ။သူ့ရာထူးမှာ ပိုမနဘေူး။အခြိနျတနျရငျ ဆငျးသှားတယျ လယျတောထဲက လာတဲ့လူဟာ လယျတောထဲမှာပဲ ပွနျဆငျးသှားခဲ့ပါတယျ။
စိတျတူ ကိုယျတူရှိတဲ့ ဇနီးသညျ Lucia Topolansky ကို ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ လကျထပျတယျ၊ သားသမီးမထှနျးကားဘူး။ အခုတော့ (၈၅)နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ သမ်မတဟောငျးကွီးက ပနျးရောငျးစားနသေတဲ့၊ တငျးတိမျ ရောငျ့ရဲခကျြပါနျော။“းကြှနျတေျာ့ကို အဆငျးရဲဆုံး သမ်မတလို့ ပွောကွတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျဆငျးရဲတယျလို့ မခံစားမိပါဘူး။ ဆငျးရဲတဲ့သူဆိုတာ ကုနျကစြရိတျမွငျ့မားတဲ့ လူနမှေုဘဝကို ကာမိဖို့ ပိုကျဆံတှကေို မရပျမနား ရှာဖှနေရေတဲ့သူတှပေါ ကဲ . . . လူ့ဘဝ တိုတို လေးထဲမှာ နောကျဆုံးပျေါ ဖကျရှငျ၊ တနျဖိုးကွီးတံဆိပျတှနေောကျကို လိုကျပွီးတော့ ရူးသှပျနတေော့မှာလား။
အကြိုးရှိတာတှကေို လုပျနပွေီး ကုနျဆုံးတော့မှာလား။ ကိုယျတိုငျပဲ ဆုံးဖွတျကွရအောငျပါ။ အဓိကအခကျြက အရေးမကွီးတာတှေ လုပျနရေငျ အရေးကွီးတာတှေ မတေ့တျတယျဆိုတဲ့ ဒဿနကို အမွဲသတိရသငျ့ပါတယျနျော။ လူ့ဘဝတိုတိုလေးမှာ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနကွေရအောငျပါ။credit : Kyaw Soe Aung
← ကမ္ဘာကျော်လူသိများလာတော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ဧရာမ ခြေရာပုံကြီး
ဦးဇော်ဇော်အား မလေးရှားအိမ်ရှေ့မင်းသားကိုယ်တိုင် ဒါတိုဆရီဘွဲ့ချီးမြှင့် →
ချစ်သူကို ‘ဝတုတ်မ’ လေးဖြစ်အောင် အစားအသောက်တွေအဆမတန်ကျွေးပြီး နောက်ဆုံးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
တရုတ်တွင် ဘဲပေါက်စလေးများထောင်နှင့်ချီ နေ့စဉ်အရှင်လတ်လတ်အကြော်ခံနေရ